Indonezia - Fitantanana MPA | Fiaretana haran-dranomasina
Indonezia - Fitantanana MPA
Ny drafitra fitantanana ny valan-javaboahary Wakatobi dia mitarika amin'ny fampiroboroboana ny fifandraisana amin'ny mpiara-belona amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso ny ezaka
Wakatobi National Park, atsimo atsinanan'i Sulawesi, Indonezia
Ny Wakatobi dia nomena ny anaran'ireo nosy lehibe efatra ao Wangi-Wangi, Kaledupa, Tomia, ary Binongko, izay miaraka amin'ireo nosy 35 kely kely ahitana ny Tukang Besi Archipelago any atsimo atsinanan'i Sulawesi, Indonezia. Ao amin'ny Coral Triangle, ny faritra dia fantatra noho ny fahasamihafan'ny haran-dranomasina manokana ary ny harena an-dranomasina dia manana lanjany ara-toekarena ambony, indrindra ho an'ny jono. Ny ankamaroan'ny mponina 100,000 ao amin'ny distrikan'i Wakatobi dia miankina amin'ny ranomasina noho ny fivelomany. Mba hanatsarana ny fitantanana ny vatohara sy ny rano manodidina, dia nambara ho Wakatobi National Park (WNP) ny 3.4 tapitrisa ny nosy sy ny rano ao amin'ny 1996.
Ankizy foko Bajo (foko gypsies ranomasina) ao amin'ny Valan-javaboaharin'i Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Indonezia. Ny ankizy dia milalao amin'ny namana sy ny "koli-koli" (sambo hazo kely tsy misy maotera sy efijery). Hetsika fahita andavanandro io, miaraka amin'ny jono, ho an'ireo ankizy bajo aorian'ny fiverenany. Sary © Marthen Welly / TNC-CTC
Ao amin'ny 2003, ny fanadihadiana ara-tontolo iainana ny vatohara dia nanimba ny fahasimban'ny fahasimbana, indrindra amin'ny fomba fanjonoana manimba (fanjonoan'ny jono sy ny jono cyanide) ary ny fanimbana. Fanampin'izany, ny fampandrosoana sarobidy dia nandrahona ny haran-dranomasina sy ny tontolo iainana amoron-dranomasina ao amin'ny faritra noho ny fambolena sy ny fasika ary ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany.
Haran-dranomasina ao amin'ny zaridainam-pirenena Wakatobi Ranomasin'i SE Sulawesi, Indonezia. Sary © Burt Jones sy Maurine Shimlock / Zava-miafina ranomasina
Ny fandefasana ireo fako fanjonoana sy fanimbana any Wakatobi dia niasa niaraka tamin'ny Wacatobi National Author Fund (WWC) sy ny World Wildlife Fund (WWF) ny tetikasa Nature Wildlife Fund (WWF) sy ireo mpandray anjara maro samihafa mba hanohanana ny famolavolana drafitra fitantanana nohavaozina. Ity asa ity dia ahitana ny fanavaozana ny drafitry ny zoning amin'ny alàlan'ny toro-hevitra ara-teknika sy fifanarahana amin'ny mpiara-miasa. Amin'ny fampidirana ireo vondrom-piarahamonina ao an-toerana, mifantoka amin'ny fitantanana fiaraha-miasa sy fananganana fototra ara-dalàna ho an'ny zoningin'ny zaridaina sy ny fampiharana, ny hetsika fiarovana ao Wakatobi dia natao ho tontolo iainana, ara-tsosialy ary ara-toekarena maharitra.
Mba hiatrehana ireo fandrahonana amin'ny haran-dranomasina amin'ny fiovan'ny toetr'andro, dia nampidirina ao amin'ny drafitry ny zoning ny fitsipika fanakianana, anisan'izany ny fanehoana sy ny famokarana ireo toerana manan-danja tsy misy toerana, ary ny fiarovana ny toeram-ponenana azo antoka toy ny fitrandrahana ny trondro sy ny soka-dranomasina. Betsaka ny zava-nitranga ho an'ny fampiasana zoning maro an'isa, mifototra amin'ny sehatra biolojika, ekolojika, ary sosialy ara-ekonomika ao amin'ilay faritra, dia novokarina sy novaina tamin'ny fampidirana vondrona eo an-toerana. Ao amin'ny 2007, ny Tale jeneraly momba ny fiarovana ny ala sy ny fiarovana ny natioran'ny Minisiteran'ny Ala sy ny lehiben'ny distrikan'i Wakatobi dia nanome endrika ny Planin'ny Zoning Wakatobi.
Anisan'ny faritra misy ny faritra: faritra tsy misy atsy na aroa, faritra tsy misy maripana, faritra fizahan-tany tsy misy dikany, izay ahafahana manao hetsika fizahan-tany tsy misy fatra, ary faritra fampiasana nentim-paharazana ho an'ny mpanjono pelagika.
Ny lafiny manan-danja amin'ny drafitry ny fitantanana dia ny tetikady fitiliana, fanaraha-maso sy fanaraha-maso. Ny fanentanana fifandraisana ho an'ny Wakatobi dia nitranga tany amin'ny tanàna ambanivohitra, tao amin'ny distrika ambany sy ny distrika. Fivoriana matetika no naneho ny haavon'ny fifamindram-pahefana, izay niantoka fa ny Wakatobi National Park, ny governemanta distrikan'i Wakatobi, ary ny vondrom-piarahamonina ao an-toerana dia nahalala tsara momba ny fizotry ny zoning. Fanampin'izany, ireo hafatra amin'ny fampahalalam-baovao dia zaraina amin'ny fahitalavitra cable mba hanohanana ireo olana momba ny tontolo iainana, amin'ny ankapobeny. Na dia sarotra aza, tamin'ny alalan'ny fampielezan-kevitra, dia nanjary za-draharaha sy nahalala ny tombotsoan'ny MPA ny vondrom-piarahamonina ao Wakatobi.
Vahoaka fanaraha-maso ao amin'ny Valan-javaboaharin'i Wakatobi. Sary © TNC / WWF
Ny programa fanaraha-maso an'i Wakatobi dia misy singa telo: mpiambina WNP, polisy eo an-toerana, fiarahamonina eo an-toerana, jono amin'ny distrika ary Wakatobi Marine & Fisheries Agency dia manara-maso 10 andro / volana, amin'ny fampiasana Floating Ranger Stations (FRS) manodidina an'i Wakatobi. Ho fanampin'izany, ny mpiambina sy ny polisy WNP dia manao fisafoana tsy ampoizina, ary farany, fisafoana ataon'ny mpiambina WNP, tafika an-dranomasina Indoneziana, polisy, ary ny maso sy ny jono marin-dranomasina Wakatobi dia miseho imbetsaka isam-bolana.
Maro ireo fandaharam-panaraha-maso ao amin'ny Wakatobi National Park izay manombana ny fahombiazan'ny drafitra fitantanana:
WNP Rangers sy Wakatobi Marine & Fisheries Agency dia mirakitra ny antsipirian'ny mpampiasa loharano ao amin'ny valan-javaboary mandritra ny andro maro anaovana fanadihadiana isam-bolana.
Mandritra ny volana feno amin'ny vanim-potoana miteraka tsotsotra, ny tompon'andraikitra ao amin'ny Wakatobi National Park Authority dia manoratra ny isa sy karazan-trondro amin'ny tranokalan'ny fako fitahirizan'ny trondro.
Ny taona 1-2, ny mpikarakara WNP dia manangona ny angon-drakitra mikasika ny toetry ny fambolena sy ny haran-dranomasina manerana ny valan-javaboary.
Ny fandinihan-java-baovao momba ny biby an-dranomasina (trozona sy feso) dia voarakitra ao amin'ny fanadihadiana rehetra.
Mandritra ny volana feno, isam-bolana, manara-maso ny tora-pasika fanatodizany ny ekipa mpanara-maso ny WNP ary manoratra ny karazana, ny haben'izy ireo sy ny isan'ireo sokatra.
Ny taona 2 rehetra dia manara-maso ny toeram-ponenana sy toeram-ponenana an-dranomasina, ny ala honko, ary ny ahitra eny an-tsaha. Ny fanadihadiana telo dia natao mba handinihana ny fomba fijerin'ny mpandray anjara momba ny fahombiazan'ny fitantanana ny MPA, ary ny fampivoarana ny fahombiazan'ny fandaharam-potoana amin'ny fandalinana amin'ny alalan'ny fahitana ny fironana eo amin'ny fahitana ao an-toerana.
Ny vokatry ny fanadihadiana natao dia nitarika fanohanana bebe kokoa ho an'ny MPA sy ny rafitra zoning. Ohatra, ny vondrona vondrom-piarahamonina iray ao amin'ny Nosin'i Tomia dia nametraka ny faritra tsy misy atiny ho toy ny banky trondro, ary avy eo dia namporisika ireo mpanjono an-toerana hanaja ny fitsipika sy ny fitsipika tsy misy ny zone. Ho an'ity ezaka ity dia ny vondrona vondrona (Komunto) no nahazo ny UN Equator Award tamin'ny 2010. Ary tao amin'ny 2012, ny National Park Wakatobi dia nandray ny sata Man sy Biosphère Reserve noho ny ezaka nataony mba hanangonana ny fiarovana ny natiora sy ny fampandrosoana maharitra.
Wakatobi NP amin'izao fotoana izao dia manana ny iray amin'ireo ekipa mpanara-maso tsara indrindra momba ny varotra biodiversity any amin'ireo MPA rehetra any Indonezia. Ny fandaharanasa momba ny fitsaboana momba ny fahasalamana momba ny fahasalamana dia namaritra ny fitantanana fitantanana ny Wakatobi NP. Na dia tsy dia nanolo-tena haingana loatra ny valinteny noraisin'i Wakatobi NP ho an'ny adihevitra samihafa, dia mamporisika ny manamarika fa ny haavon'ny fahatsiarovan-tena sy ny fahalalan'ireo mpiambina Wakatobi NP sy ny fiarahamonina dia nitombo be dia be mba hahitana ny loza ateraky ny tontolo iainana an-dranomasina sy ny toerana fanjonoana. Ho fananganana ireo fanamby ireo, na ny governemantan'ny distrikan'i Wakatobi sy ny tompon'andraikitra Wakatobi NP dia nanaiky hanangana seha-pifanakalozam-baovao maromaro ahitana maso ivoho governemanta, ary solontenan'ny vondrona mba hanatsarana ny fandrindrana sy hanamafy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo sehatra manan-danja.
Ny fandraisan'anjaran'ny mpandray anjara avy amin'ny forums miaraka amin'ny fiarahamonina ao an-toerana, alohan'ny hiasa eny an-kianja, dia miantoka fa ny mpikambana ao an-toerana sy ny governemanta dia manohana ny asa atao.
Asa goavana miaraka amin'ny fiarahamonina ao an-toerana dia nanatsara ny fahatakaran'ny mponina ny tombotsoan'ny MPA, ary ny filany ny fandraisana anjara amin'ny fitantanana Park.
Asa goavana tamin'ny governemanta teo an-toerana no tena ilaina mba hamporisihana sy hampandroso ny fitantanana fitantanana iombonana eo amin'ny governemanta eo an-toerana sy ny National Park.
Ny fananana ekipa matanjaka, asa anorenana, famatsiam-bola mazava, asa sy andraikitra mazava eo anivon'ny mpikambana tsirairay dia ilaina amin'ny tetikasa mahomby.
Ilaina ny fanaraha-maso mba hampidirana ny fandaharanasa momba ny angona azo antoka, mba hahazoana antoka fa ny design sy ny planina MPA dia mifanaraka amin'ny toetran'ny zavamananaina sy ny tontolo iainana.
Ny valan-javaboahary Wakatobi sy ny governemantan'ny distrika dia nanaiky ny hamorona seha-pifanakalozam-pivoarana samihafa mba hamporisihana ny fifandraisana eo amin'ireo sampan-draharahan'ny governemanta sy solontenan'ny vondrom-piarahamonina, hampiroborobo ny mangarahara, ary hanatsara ny fandrindrana mba hahazoana antoka fa ny tetik'asa momba ny fiarovana dia natao hanohanana ny fampandrosoana eo an-toerana.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoNy Margaret A. Cargill Foundation
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWorld Wildlife Fund
Minisiteran'ny ala, Direktorat jeneralin'ny fiarovana ny ala sy ny fiarovana ny natiora
Ministeran'ny jono sy ny raharaha an-dranomasina
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoTNC Indonesia Marine Program
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoWWF Indonesia Marine Program